गलत डिजाइनले करोडौको खानेपानी आयोजना लथालिङ्ग - Wash Khabar
गलत डिजाइनले करोडौको खानेपानी आयोजना लथालिङ्ग
२४ बैशाख २०७६, मंगलवार ०८:२४ 377 पटक हेरिएको
पर्वत : गाउँमा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्दै गर्दा कुश्मा नगरपालिका १२ ठूलीपोखरीका बासिन्दाले सोचेका थिए, अब खानेपानीको समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने भयो । बाजे बराजुको पालामा जस्तो खानेपानी बोकेर खानुपर्ने दिन सदाका लागि बिदा हुने भयो । अब सुखको दिन फिर्ने भयो ।
‘त्यो बेलाका प्राविधिकहरूले पानीको मुहान भन्दा पानी संकलन गर्ने रिजर्भ्वायर ट्याङकी उचाइमा राखिदिए, अनि पानी वितरण गर्नुपर्ने ट्याङकीमै पानी नचढेपछि उपभोक्ताको धारामा पानी जाने कुरै भएन,
तर उनीहरूले देखेको त्यो सपना पूरा हुनै पाएन । खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा नहुँदै धारामा पानी आउन छोड्यो । अहिले खानेपानी आयोजनाको रिजर्भ्वायर ट्याङ्की मात्र देख्न पाइन्छ, पानी खस्ने धाराहरुको त अवशेष पनि देखिदैन ।
वि.सं. २०५२ सालमा निर्माण भएको टुनीखोला खानेपानी आयोजना पर्वतकै गौरवको योजना मानिएको थियो । खानेपानी आयोजनाबाट झन्डै ४ सय भन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका थिए ।
कुनै पनि खानेपानी आयोजना कम्तीमा २० बर्षको लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ । तर उक्त खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको एकै बर्षमा लथालिङ्ग भएको थियो । टुनीखोलामा रहेको पानीको मुहान र पानी जम्मा गरेर गाउँमा वितरण गर्ने रिजर्भ्वायर ट्याङ्कीको उचाइ नमिलाईकन निर्माण गरिएकाले निर्माण पूरा गर्ने बित्तिकै आयोजना बन्द भएको १२ नं. वडाका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजना बन्द हुनुमा उपभोक्ताको कुनै दोष रहेको वडाध्यक्ष पौडेल बताउनुहुन्छ । ‘त्यो बेलाका प्राविधिकहरूले पानीको मुहान भन्दा पानी संकलन गर्ने रिजर्भ्वायर ट्याङकी उचाइमा राखिदिए, अनि पानी वितरण गर्नुपर्ने ट्याङकीमै पानी नचढेपछि उपभोक्ताको धारामा पानी जाने कुरै भएन, यसरी बन्द भएको हो खानेपानी आयोजना’ वडाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ।
रिजर्भ्वायर ट्याङ्कीलाई पानीको मुहानभन्दा होचो स्थानमा पर्ने गरी निर्माण गर्ने हो भने आयोजना अझै पनि सञ्चालन हुने सम्भावना रहेको शिक्षक राजु सापकोटाले बताउनुभयो ।
‘करोडौंको खानेपानी आयोजना लथालिङ्ग भएको बिषयमा कसैले चासो नदिंदा आयोजना पुनःनिर्माण हुन नसकेको गाउँलेहरु बताउँछन् । त्यसबेला स्टिमेट गर्ने इञ्जिनियर तथा प्राविधिक को थिए ? कसले त्यस्तो डिजाइन गरेर दिए ? केही थाहा भएन । गाउँलेले कुरा उठाएको भए सायद बन्न सक्ने सम्भावना थियो ।’ ठूलीपोखरीका भरत बन्जाडेले बताउनुभयो ।
टुनीखोला खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग झन्डै ४ करोड रुपैयाँ माग गरिएको १२ नं. वडाका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।